Induced abortion and consequences, effects on next pregnancy – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Induced abortion and consequences, effects on next pregnancy
ကိုယျဝနျဖကျြခခြွငျး နှငျ့ နောကျဆကျတှဲ ဆိုးကြိုးမြား
ကိုယျဝနျ “ဖကျြခခြွငျး” နဲ့ ” ပကျြကခြွငျး”…. အမြိုးသမီးတဈယောကျ ကိုယျဝနျ ရှိပွီးနောကျပိုငျးမှာ မိခငျ၏ ခန်ဓာကိုယျ ကနျြးမာရေးကွောငျ့ (သို့) သန်ဓသေားရဲ့ ခြို့ယှငျးမှုကွောငျ့ တခါတရံမှာ ကိုယျဝနျ ပကျြကြ တတျပါတယျ… သို့သျော တခွားအကွောငျးရငျးမြား မရှိပဲ မိမိကိုယျတိုငျက လှယျထားသော ကိုယျဝနျကို မလိုခငျြ၍ ပကျြကအြောငျ ပွုလုပျခွငျးကိုတော့ ကိုယျဝနျဖကျြခတြယျ(induced abortion)လို့ ချေါရမှာပါ…
ဘာကွောငျ့မြား ကိုယျဝနျဖကျြခကြွတာလဲ ?…လို့ စဈတမျးကောကျတဲ့အခါမှာ ကလေးယူခြိနျမတနျသေးလို့ ၊ ကလေးမှေးရနျ အခြိနျမပေးနိုငျသေးလို့ လို့ အဓိကဆိုကွပါတယျ… ဒွါ့ပငျ လူမှုစီပှားရေးအခကျအခဲမြား – ပညာရေး(သို့)အလုပျအကိုငျမှာ အနှောကျအယှကျဖွဈမှာစိုးခွငျး၊ ယခုပငျ ကလေးတှမြေားနပွေီး ပိုကျဆံမရှိဆငျးရဲနသေေးခွငျး၊ ကလေးကို မိခငျတဈယောကျတညျး ပွုစုပြိုးထောငျရနျ မဖွဈနိုငျသေးခွငျး၊နောကျကလေးတဈယောကျမှေးရနျ ပိုကျဆံမတတျနိုငျသေးခွငျး၊မိခငျ၏ အသကျမှာ ငယျရှယျလှနျး (သို့) ကွီးလှနျး၍ ကလေးယူရနျ မသငျ့ဖူးထငျကာ ဖကျြခခြွငျး တှပေဲ ဖွဈပါတယျ…
ယခုခတျေမှာ ဒီလို မိမိမလိုလားသေးတဲ့ ကိုယျဝနျကို တားဆီးနိုငျဖို့ရာ … သန်ဓတေားဆေး(သို့) ပစ်စညျးမြား အသုံးပွုလို့ရသလို.. ကလေးမြားပွားပွီး မိခငျ အသကျကွီးလြှငျ သားကွောဖွတျလြှောကျလှာတငိနိုငျခွငျးတှေ ရှိသျောလညျး .. ကိုယျဝနျဖကျြခခြွငျးတှကေတော့ ရှိနဆေဲပါ… ဘာကွောငျ့လဲ ? … လူတဈဦးခငျြးစီ၏ ကနျြးမာရေးအသိ၊ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကနျြးမာရေးအထောကျအပံ့ စတာတှကွေောငျ့ ကိုယျဝနျမလိုခငျြပါက ဖကျြခလြိုကျမယျဆိုသော စိတျတှေ လူတှဆေီမှာ စှဲကပျနဆေဲ ဖွဈပါတယျ…
မိမိမှာ ရလာသညျ့ ကိုယျဝနျကို မလိုခငျြ၍ ဖကျြခလြိုကျသျောလညျး နောကျဆကျတှဲ ပွသနာမြား ဖွဈလာနိုငျပါတယျ…- ကိုယျဝနျပကျြကစြရေနျ သားအိမျညဈအားကောငျးစသေညျ့ဆေးတှေ သောကျခွငျး ၊ သားအိမျတှငျးသို့ သံခြှနျ(သို့) တုတျ စသညျ့ပစ်စညျးမြား ထိုးထညျ့ကာ ဖကျြခခြွငျး တှကွေောငျ့ သားအိမျပေါကျပွဲ ဒဏျရာတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ… ပထမဆုံးအနနေဲ့ သှေးထှကျလှနျနိုငျပါတယျ.. ရှောချရပွီး အသကျဆုံးသညျ့ထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ…. ဒါပွငျ သားအိမျတှငျး သန်ဓသေား အပိုငျးအစမြားကနျြခဲ့၍ သားအိမျခွဈရခွငျး၊ဆေးရုံတှငျ ရကျကွာရှညျနရေခွငျး၊ မိမိ အသုံးပွုခဲ့သော သံခြှနျ(သို့) ပစ်စညျးမှာ မသနျ့ရှငျး၍ ရောဂါပိုးမြားဝငျနိုငျခွငျး၊ ကိုယျဝနျဖကျြခထြားသောဒဏျကွောငျ့ အလုပျအကိုငျပကျြခွငျး၊နထေိုငျရခကျခွငျးအစရှိတာတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ…
မိမိဟာ တခြိနျက မလိုခငျြ၍ ဖကျြခဖြူးသျောလညျး ယခု ကိုယျဝနျယူခငျြလာသောအခါ… မိမိမှာ သားအိမျခွဈထားရသျောကွောငျ့ ကိုယျဝနျယူရနျ နှောငျ့နှေးကွနျ့ကွာခွငျး၊သားအိမျတှငျးရောဂါပိုးမြား ဝငျထား၍ နာတာရှညျမီးယပျရောဂါ ဖွဈနိုငျခွငျး၊ ကိုယျဝနျမမွဲခွငျး၊သားအိမျပွငျပတှငျ သန်ဓတေညျခွငျး၊ နောကျထပျကိုယျဝနျဆောငျရနျ စိုးရှံ့စိတျ ဝငျခွငျး တှေ ကွုံရနိုငျပါတယျ…ဒါကွောငျ့ ဒီလိုတှေ မဖွဈဖို့ရာ လူတဈဦးတဈယောကျခငျြးစီ၏ ကနျြးမာရေး အသိဟာ အငျမတနျ အရေး ပါပါတယျ…ဖွဈလာမယျ့ဘေး ပွေးတှခွေ့ငျးထကျ မဖွဈခငျ ရှောငျရှားနိုငျတဲ့ နညျးလမျးမြားကို ကနျြးမာရေးအသိနဲ့ သခြောစှာ ဖွရှေငျးသငျ့ပါတယျလို့ တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျ..
ဆငျခွငျတုံတရားကငျးသော သူမြားအဖွဈမှ ကငျးဝေးပါစလေို့ တောငျးဆုမတ်ေတာပွုလကျြ…..
ကိုယ်​ဝန်​ဖျက်​ချခြင်း နှင့်​ နောက်​ဆက်​တွဲ ဆိုးကျိုးများ
ကိုယ်​ဝန်​ “ဖျက်​ချခြင်း” နဲ့ ” ပျက်​ကျခြင်း”…. အမျိုးသမီးတစ်​​ယောက်​ ကိုယ်​ဝန်​ ရှိပြီး​နောက်​ပိုင်းမှာ မိခင်​၏ ခန္ဓာကိုယ်​ ကျန်းမာ​ရေး​ကြောင့်​ (သို့) သ​​န္ဓေသားရဲ့ ချို့ယွင်းမှု​ကြောင့်​ တခါတရံမှာ ကိုယ်​ဝန်​ ပျက်​ကျ တတ်​ပါတယ်​… သို့​သော်​ တခြားအ​ကြောင်းရင်းများ မရှိပဲ မိမိကိုယ်​တိုင်​က လွယ်​ထား​သော ကိုယ်​ဝန်​ကို မလိုချင်​၍ ပျက်​ကျ​အောင်​ ပြုလုပ်​ခြင်းကို​တော့ ကိုယ်​ဝန်​ဖျက်​ချတယ်​(induced abortion)လို့ ​ခေါ်ရမှာပါ…
ဘာ​ကြောင့်​များ ကိုယ်​ဝန်​ဖျက်​ချကြတာလဲ ?…လို့ စစ်​တမ်း​​​ကောက်​တဲ့အခါမှာ က​လေးယူချိန်​မတန်​​သေးလို့ ၊ က​လေး​မွေးရန်​ အချိန်​မ​ပေးနိုင်​​သေးလို့ လို့ အဓိကဆိုကြပါတယ်​… ဒြါ့ပင်​ လူမှုစီပွား​ရေးအခက်​အခဲ​များ – ပညာ​ရေး(သို့)အလုပ်​အကိုင်​မှာ အ​နှောက်​အယှက်​ဖြစ်​မှာစိုးခြင်း၊ ယခုပင်​ က​လေး​တွေများ​နေပြီး ပိုက်​ဆံမရှိဆင်းရဲ​နေ​သေးခြင်း၊ က​လေးကို မိခင်​တစ်​​ယောက်​တည်း ပြုစုပျိုး​ထောင်​ရန်​ မဖြစ်​နိုင်​​သေးခြင်း၊​နောက်​က​လေးတစ်​​ယောက်​​မွေးရန်​ ပိုက်​ဆံမတတ်​နိုင်​​သေးခြင်း၊မိခင်​၏ အသက်​မှာ ငယ်​ရွယ်​​လွန်း (သို့) ကြီးလွန်း၍ က​လေးယူရန်​ မသင့်​ဖူးထင်​ကာ ဖျက်​ချခြင်း ​တွေပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​…
ယခု​ခေတ်​မှာ ဒီလို မိမိမလိုလား​သေးတဲ့ ကိုယ်​ဝန်ကို တားဆီးနိုင်​ဖို့ရာ … သ​န္ဓေတား​ဆေး(သို့) ပစ္စည်းများ အသုံးပြုလို့ ရသလို.. က​လေးများပြားပြီး မိခင်​ အသက်​ကြီးလျှင်​ သား​ကြောဖြတ်​​လျှောက်​လွှာတငိနိုင်​ခြင်း​တွေ ရှိ​သော်​လည်း .. ကိုယ်​ဝန်​ဖျက်​ချခြင်း​တွေက​တော့ ရှိ​နေဆဲပါ… ဘာ​ကြောင့်​လဲ ? … လူတစ်​ဦးချင်းစီ၏ ကျန်းမာ​ရေးအသိ၊ စီးပွား​ရေး၊ လူမှု​ရေး၊ ကျန်းမာ​ရေးအ​ထောက်​အပံ့ စတာ​တွေ​ကြောင့်​ ကိုယ်​ဝန်​မလိုချင်​ပါက ဖျက်​ချလိုက်​မယ်​ဆို​သော စိတ်​​တွေ လူ​တွေဆီမှာ စွဲကပ်​​နေဆဲ ဖြစ်​ပါတယ်​…
မိမိမှာ ရလာသည့်​ ကိုယ်​ဝန်​ကို မလိုချင်​၍ ဖျက်​ချလိုက်​​သော်​လည်း ​နောက်​ဆက်​တွဲ ပြသနာများ ဖြစ်​လာနိုင်​ပါတယ်​…- ကိုယ်​ဝန်​ပျက်​ကျ​စေရန်​ သားအိမ်​ညစ်​အား​ကောင်း​စေသည့်​​ဆေး​တွေ ​သောက်​ခြင်း ၊ သားအိမ်​တွင်းသို့ သံချွန်​(သို့) တုတ်​ စသည့်​ပစ္စည်းများ ထိုးထည့်​ကာ ဖျက်​ချခြင်း ​တွေ​ကြောင့်​ သားအိမ်​​ပေါက်​ပြဲ ဒဏ်​ရာ​တွေ ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​… ပထမဆုံးအ​နေနဲ့ ​သွေးထွက်​လွန်​နိုင်​ပါတယ်​.. ​​ရှောခ်​ရပြီး အသက်​ဆုံးသည့်​ထိ ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​…. ဒါပြင်​ သားအိမ်​တွင်း သ​န္ဓေသား အပိုင်းအစများကျန်​ခဲ့၍ သားအိမ်​ခြစ်​ရခြင်း၊​ဆေးရုံတွင်​ ရက်​ကြာရှည်​​နေရခြင်း၊ မိမိ အသုံးပြုခဲ့​သော သံချွန်​(သို့) ပစ္စည်းမှာ မသန့်​ရှင်း၍ ​ရောဂါပိုးများဝင်​နိုင်​ခြင်း၊ ကိုယ်​ဝန်​ဖျက်​ချထား​သောဒဏ်​​ကြောင့်​ အလုပ်​အကိုင်​ပျက်​ခြင်း၊​နေထိုင်​ရခက်​ခြင်းအစရှိတာ​တွေ ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​…
မိမိဟာ တချိန်​က မလိုချင်​၍ ဖျက်​ချဖူး​သော်​လည်း ယခု ကိုယ်​ဝန်​ယူချင်​လာ​သောအခါ… မိမိမှာ သားအိမ်​ခြစ်​ထားရ​သော်​​ကြောင့်​ ကိုယ်​ဝန်​ယူရန်​ ​နှောင့်​​နှေးကြန့်​ကြာခြင်း၊သားအိမ်​တွင်း​ရောဂါပိုးများ ဝင်​ထား၍ နာတာရှည်​မီးယပ်​​ရောဂါ ဖြစ်​နိုင်​ခြင်း၊ ကိုယ်​ဝန်​မမြဲခြင်း၊သားအိမ်​ပြင်​ပတွင်​ သ​န္ဓေတည်​ခြင်း​၊ ​နောက်​ထပ်​ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ရန်​ စိုးရွံ့စိတ်​ ဝင်​ခြင်း ​တွေ ကြုံရနိုင်​ပါတယ်​…ဒါ​ကြောင့်​ ဒီလို​တွေ မဖြစ်​ဖို့ရာ လူတစ်​ဦးတစ်​​ယောက်​ချင်းစီ၏ ကျန်းမာ​ရေး အသိဟာ အင်​မတန်​ အ​ရေး ပါပါတယ်​…ဖြစ်​လာမယ့်​​ဘေး ​ပြေး​တွေ့ခြင်းထက်​ မဖြစ်​ခင်​ ​ရှောင်​ရှားနိုင်​တဲ့ နည်းလမ်းများကို ကျန်းမာ​ရေးအသိနဲ့ ​သေချာစွာ ​ဖြေရှင်းသင့်​ပါတယ်​လို့ တိုက်​တွန်းလိုက်​ရပါတယ်​..
ဆင်​ခြင်​တုံတရားကင်း​သော သူများအဖြစ်​မှ ကင်း​ဝေးပါ​စေလို့ ​တောင်းဆု​မေတ္တာပြုလျက်​…..